ချစ်ကြည်အေး: ချစ်သူတို့ရဲ့ တိမ်ပြာပြာနေ့တနေ့
ဇွန်မိုးစက် Sun Jan 23, 09:59:00 PM GMT+8
ဆက်မဆိုတော့ဘူး၊ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ထားလိုက်တော့မယ်။ :D
စားပွဲနံပါတ် ၉ မှာ ထိုင်ခွင့်ရအောင် စီစဉ်ပေးတဲ့ မင်္ဂလာသတို့သားကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့....နော် မချစ်။
အဖြူရောင်နတ်သမီး Sun Jan 23, 10:25:00 PM GMT+8
မင်္ဂလာပွဲကို ဓာတ်ပုံများကနေတဆင့် တက်ရောက်သွားပါတယ်...
ကျွေးကျွေး မကျွေးကျွေး စားသွားပါတယ်...
မင်္ဂလာမောင်နှံလည်း ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ရာသက်ပန် ပေါင်းရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော်...
Anonymous Sun Jan 23, 10:38:00 PM GMT+8
kay Sun Jan 23, 10:47:00 PM GMT+8
ပြီတီဦး နဲ့.. အူငဲ ပွဲ ထက် ပို ကြည့်လို့ ပျော်ဖို့ ကောင်းတဲ့.. တီဇက်အေ ရဲ့.. မင်လာဆောင်ကို..ဒီကနေ .. အတူ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.. မင်္ဂလာ မောင်နှံ ရေ...
အရေးကောင်း..အပြောကောင်းတဲ့..သတို့ သား ကြောင့်..သတို့ သမီး တော့..အသက်ရှည် ပျော်ရွှင်ပေ တော့မည်..း)
Moe Cho Thinn Sun Jan 23, 10:48:00 PM GMT+8
ဟုတ်ပါ့၊ ကြည့်ရတာကို ပျော်စရာကြီးပဲ။ ဘလော့ဂါတွေ နဲ့ စည်ကားနေတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေး ဖြစ်နေမှာပေါ့။ သတို့သား သတို့သမီး လဲ လှကြပါပေတယ်။
Rita Sun Jan 23, 10:50:00 PM GMT+8
TZA Mon Jan 24, 12:15:00 AM GMT+8
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အဖြူရောင်နတ်သမီး တောင်းပေးတဲ့ဆုကို ပြည့်လိုပါတယ်၊ ပေါက်ကိုတော့ ပွဲလုပ်ရင်းတန်းလန်း စီဘောက်မှာ ကျေးဇူးသွားတင်လိုက်သေးတယ်၊ ကေသွယ်တို့သာ စလုံးမှာရှိရင် ဖိတ်ဖြစ်ဦးမှာ၊ အမချိုသင်းရောပဲ (နာ့ကိုလှတယ်ပြောလို့)၊ ရီတာရေ.. အတူတူပဲ၊ ဘာမှမစားလိုက်ရဘူး..
Anonymous Mon Jan 24, 01:47:00 AM GMT+8
သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးရော ချောတယ်နော့။ ဟိုဖက်က ကိုးရီးယားအခန်းဆက်ကို စိတ်မရှည်ဖြစ်နေတား) ကျေးဇူး အကြည်ရေ။
Anonymous Mon Jan 24, 03:24:00 AM GMT+8
ရှယ်ပဲ.. သတို့သမီးသစ်စက်စက်က လှနေရော.. (သတို့သားလည်းပါပေးလိုက်ပါတယ်) :P
အိမ့်ချမ်းမြေ့ Mon Jan 24, 07:29:00 AM GMT+8
မင်္ဂလာအပေါင်းနှစ် ပြည့်စုံကြပါစေ...လို့း))
P.Ti Mon Jan 24, 08:59:00 AM GMT+8
Congratulations TZA. Hope you will have many thar thar mee mee... So you can contribute well to SG :P.
Heartmuseum Mon Jan 24, 09:42:00 AM GMT+8
ဟုတ်ပါ့ ပျော်စရာကြီးဗျာ.... ၂ယောက်လုံး လှ၏။ ချော၏....
Cameron Mon Jan 24, 12:21:00 PM GMT+8
TZA ဆိုတာ ကွန်မန့်လာလာရေးနေတာတော့သိတယ် လူကိုခုမှမြင်ဖူးတာ..။
မောင်လေးနဲ့ ညီမလေး ရာသက်ပန် အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်....။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Mon Jan 24, 03:26:00 PM GMT+8
ပျော်ရွှင်သာယာချမ်းမြေ့သော အားကျဖွယ် ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ကြပါစေ..
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ မင်္ဂလာပွဲလေးက အားကျစရာ အတိပါဘဲ။
Anonymous Mon Jan 24, 04:38:00 PM GMT+8
ကြိုဖိတ်ရင် လာမှာပေါ့ .. စလုံးမှာ မရှိလို့ မဖိတ်ဘူးဆိုတာတော့ ဟုတ်သေးပါဘူး တီဇက်အေရယ်...သတို့သမီးထက် သတို့သားက ပိုချောပါတယ်( သတို့သမီးတော့ ဘလော့မဖတ်ဘူးမလားဟင်)
Anonymous Mon Jan 24, 04:50:00 PM GMT+8
၂) အစားအစာတွေချည်း တခေါက်ထပ်လာကြည့်တယ်။
၃) တီဇက်အေက အဖေတူသားဖြစ်ကြောင်း ထပ်လာပြောတယ်။
၄)ယနေ့မှစ နှစ်တရာတိုင်စေ လို့ လဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အပေါ်က အနောနီးမတ်ကလဲ အမပါပဲ။
pandora Tue Jan 25, 12:06:00 AM GMT+8
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးပဲ.. သန့်သန့်တို့မောင်နှံ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ကြစေဖို့ အတူ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Tue Jan 25, 12:12:00 AM GMT+8
ကာယကံရှင်က မတင်ပဲ ကိုရီးယားကားလို ရှည်လျားပေများနေတာ..
စားစရာတွေ ကြည့်ပြီး..မနွှဲလိုက်ရတာ နာသကွာ...
မိုးယံ Tue Jan 25, 11:49:00 AM GMT+8
ကြည့်သွားတယ်... တရားသဘောတစ်ခု ရလိုက်တယ်.
အင်ကြင်းသန့် Tue Jan 25, 12:53:00 PM GMT+8
ခက်ပီ .... အစားအသောက်တွေကို ဒီနေ့အထိပြန်မြင်ယောင်ပြီး စွဲနေလို့ပါဆို ဒီပုံတွေလာကြည့်လိုက်ခါမှ ပိုဆိုးသွားပြီ.... (နောက်တစ်ပွဲ နားစွင့်ထားလိုက်ဦးမယ်....) :D
သတို့သားရော သတို့သမီးရော အရမ်းအရမ်းကို ချောပါသည်...(ကလေးကင်ပွန်းတပ်လည်းဖိတ်အောင်လို့... ဘောလုံးတစ်သင်းစာ အရေအတွက်နဲ့အညီဆို ပွတာပဲ....) :D
Anonymous Tue Jan 25, 03:26:00 PM GMT+8
ပျိုပျိုတွေဝိုင်းနေ တဲ့တို့ ဒတ်ဘုံ ဆြာ ဘလောဂါ အကောင်းစားလေးပါသွားပြီ။နှမြောပါဘိ။
Anonymous Wed Jan 26, 10:14:00 AM GMT+8
ယနေ့မှ စ၍ နှစ်တရာတိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ပေါင်းသင်းနိုင်ပါစေဗျာ
TZA Wed Jan 26, 10:41:00 PM GMT+8
rachel.. ကိုးရီးယားအခန်းဆက်က မိုက်ပါတယ်၊ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပေးပါ၊ ဟားဟား..
★Craton.. သိုင်းကျူး.. ကွင်းစကွင်းပိတ် ကယ်သွားလို့ပေါ့။
P.Ti.. မွေးတာလွယ်ပြီး ကျွေးတာခက်တဲ့ ခေတ်ကြီးမှာဗျာ၊ မလုပ်ပါနဲ့.. ဟဲဟဲ..
မိုးငွေ့.. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေခင်မျာ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်).. ကျေးဇူးပါခင်မျာ၊ တကယ်ပါ။
အမခင်မင်းဇော်.. တခြားနေရာက သယ်ရင်းတွေကို အားနာလို့ မဖိတ်ဖြစ်တာပါ၊ ဖိတ်ချင်စိတ်ကတော့ အင်မတန်ရှိနေပါတယ်၊ အဟုတ်ပြောတာ။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း.. ကိုကြီးကျောက်ရှေ့ကပြေးရတာ ပျော်တယ်ဗျာ၊ ပျော်တယ်ဗျာ၊ ဟဲဟဲဟဲ..
မိုးယံ.. လက်ထဲကပုတီးကို ချလိုက်ပါ၊ ဟဲဟဲ..
အင်ကြင်းသန့်.. တို့တွေမွေးပေးမယ်၊ ညည်းထိန်းပေးမလား??
ဘိရုမာမလေး.. ဝိုင်းနေတဲ့ပျိုပျိုတွေကို တချက်ပြောပေးပါ၊ အကြွေးဆပ်စရာ မရှိဘူး၊ လိုချင်ရင် လူကိုသာ အပိုင်သိမ်းသွားပါလို့..
ရွှေစင်ဦး.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ဆုတောင်းပေးသူတွေလည်း လိုချင်တာတွေ ပြည့်နိုင်ကြပါစေ။
Anonymous Sat Jan 29, 06:16:00 PM GMT+8
congratulations, Phyu Thandar Kyaw